Estonian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
Loading ...မကြာသေးမီနှစ်များတွင်တိုးနီးရနျးလောင်းကစားအများအပြားခက်ခဲအချိန်လေးဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း - ကဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းနှင့်အစိုးရအနေဖြင့်ဥပဒေပြု၏တင်းကျပ်နှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာအချိန်လေးဖြစ်ပါသည် - သူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းငှါမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက် ။
၏သင်တန်း, ဤအချက်များအပေါငျးတို့သ, ဒါကြောင့်ပြော, အလောင်းကစားအော်ပရေတာများ၏ရာထူးတှငျအခြို့ "သန့်စင်" ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ပိုင်ရှင်များဖြစ်သောကြောင့်အသုံးမရသောသူတို့ပိတ်လိုက်ခဲ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များ, ဆန့်ကျင်ပေါ်, နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီအွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံများဖွင့်လှစ်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အက်စ်တိုးနီးယား၏အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုကစားတဲ့အတော်ပင်ပေမယ့်မနီးမဝေးကနေဖဲချပ်များနှင့်အထိုင်စက်သွားပြီနေကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီမှာပြည်နယ်ထီနှင့် Eesti Loto စေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စာရင်းဇယားအရသိရသည်ကြောင့် Estonian အဘိဓါန်နိုင်ငံသားများ၏နီးပါး 80% အဘို့ကစားနေသည်။
ဘောလ်တစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ချစ်ခြင်းလောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးကဤသို့ဆိုပေမယ့်ပေမယ့် အက်စ်တိုးနီးယားလောင်းကစားရုံဝင်ငွေများ၏အမြောက်အများခရီးသွားဧည့်ထံမှရ ။ နှစ်နိုင်ငံပထဝီနီးကပ်မှုကြောင့်သူတို့ကိုဖင်လန်အကြားတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုထဲက။ မကြာသေးမီကသို့သော်ဒေသခံလောင်းကစားရုံမကြာခဏဧည့်သည်များရုရှားဖြစ်ကြရာ၏နံပါတ်မကြာမီဖင်လန်ညီမျှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြတဲ့သဘောထားကိုရှိသေး၏။
ပျမ်းမျှဖို့တစ်နှစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ Estonian အဘိဓါန်န်ကြီးဌာနအဆိုအရသူတို့ကဒီမှာ 800,000 သန်းညကုန်ရပြီတစ်ချိန်တည်းမှာ, ဖင်လန်ခန့် 1.6 လူများကသွားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ ဒုတိယနေရာများတွင်ဧကန်အမှန်ရုရှားဟာဖင်လန်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြ၏အောထွက်လာသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများ, မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူတည်းခိုခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုတို့ပါဝင်သည်ရုံတစျနေ့အဘို့အတိုးနီးယားမှလာမယ့်သို့မဟုတ်ခရုဇ်သဘောထားပြင်းထန်အပေါ်ဒီနေရာကိုမလာဘဲဆိုတရားမျှတသည်။
အဆိုပါဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများထက်ငယ်ရွယ်သောအသက်ရုရှား၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ စကင်ဒီနေးခရီးသွားဧည့်, ရုရှကပိုဖြုန်းတီးဖို့ဆနျ့ကငျြ။ သူတို့ကစျေးကြီးဟိုတယ်များသာရှေးခယျြလေ့, ဒါပေမယ့်လည်းလောင်းကစားရုံသေချာပေါက်ရှိသူတို့အားသော။ ထိုအခါပိုက်ဆံသူတို့နောက်ကွယ်မှကြီးမားတဲ့ဆုအနိုင်ရတဲ့၏မြော်လင့်ခြင်း၌မိမိတို့မြောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းများထက်အများကြီးပိုစွန့်ခွာ။
ထိပ်တန်း 10 Estonian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ပထမဦးဆုံးအကာစီနိုလောင်းကစားရုံဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်၎င်း၏ဟောင်းတဦးသမ္မတနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တည်ရှိရန်စဲမကြာမီပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းရှိထင်ရှား။ , အက်စ်တိုးနီးယားလောင်းကစားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကယ့်မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ တိုင်းပြည်တစ်အီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်အထူးသဖြင့်အပြီး။ အခုတော့အာဏာပိုင်များဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, သူတို့ကသာအကျိုးအတွက်အထံတော်သို့ သွား. , အလောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုအုပ်ချုပ်ဥပဒေများပိုမိုတင်းကြပ်ပြင်ဆင်ချက်မိတ်ဆက်ပေမယ့်။
လွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်, စတိုးနီးယား 200 ကွဲပြားခြားနားသောလောင်းကစားဝိုင်း (ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, slot ကစက်ခန်းမ, etc) အကြောင်းကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအလေးအနက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တော်မူသောသူတို့တွင် 19 လူများ, အပေါငျးတို့သညျဤစည်းစိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရာသီဥတုနောက်ဆုံးမှာကစားသမားရိုးရှင်းစွာအပေါငျးတို့သကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဖြစ်လာကြဘူးဘယ်မှာအခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ တူညီသောဥပဒေပြုသက်တမ်းအတွက်မဆိုတင်းကျပ်အစီအမံများမပါဝင်ပါ။ တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုသူမည်သူမဆိုမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲတိုးနီးယား၌ပြုပါနိုင်ဘူး။ လိုအပ်သောပြင်ဆင်ချက်ဈေးကွက်ထဲမှာကိုလက်ခံခဲ့ကြပြီးတာနဲ့သာကြီးမားသောကစားသမားခဲ့ကြသည်နဲ့သူတို့ရဲ့သေးငယ်ပြိုင်ဖက်စွန့်ခွာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ Estonian အဘိဓါန်အာဏာပိုင်များလောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးအပေါ်ပိုပြီးမှီခိုအားလုံးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုစလှေတျပုံကိုပါးနမှတ်သားဖို့လိုပါတယ်။ အဆိုပါရရှိသော၏အမြောက်အများယဉ်ကျေးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (46%) မှညွှန်ကြားစဉ်အားလုံးသည်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, အတော်လေးမြင့်မားသောအခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်နေကြသည်။ ကျန်ရှိသောကြက်ခြေနီနှင့်သင်ကလေးများအပါအဝင်လိုအပ်နေသူများထံအကူအညီများပေးခွင့်ပြုအစီအစဉ်များ၏ငွေကြေးအကြားဖြန့်ဝေသည်။
ရရှိနိုင်စာအုပ်များ, ပွဲတော်များ, ရုပ်ရှင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပိုပြီး: ဤတူညီသော tools တွေအများအပြားယဉ်ကျေးမှုစီမံကိန်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များစည်းရုံး။ အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်ဤဒေသများအတွက်ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ကနေငွေကြေးထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်းကြောင့်မကြာခဏလောင်းကစားအပေါ်အခွန်များဖြတ်တောက်ထံမှလက်ခံရရှိအသုံးပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံအတွက်ပိုက်ဆံစွန့်ခွာခြင်း, ဘဏ္ဍာတိုက်ကနေယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပိုလျှံရန်ပုံငွေအများစုရန်ပုံငွေသူကိုကစားသမားလုပ်ဖို့အခြားအရေးကြီးအရာဖြစ်ကြ၏။
အဆိုပါ Estonian အဘိဓါန်လောင်းကစားရုံအတွက်တတ်နိုင်သမျှစုံတယောက်သောသူသည်ကစားနေစဉ်, ၎င်း၏ခရီးစဉ်အချို့လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အဓိပ္ပာယ်ကျေနပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်, သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်သင်သိရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမဆိုအခြားစာရွက်စာတမ်းရောက်စေဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်းအားမိမိခရီးစဉ်၏ထိုအချိန်ကသင်ကကအနည်းဆုံး 21 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ရမည်။ မည်သည့်လောင်းကစားရုံဧည့်သည်များမှအဝင်ဝမှာရိုးရှင်းပြီးမှတ်ပုံတင်ရေးဖြတ်သန်းရတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အခါအသက်အရွယ်န့်သတ်ချက်ပင်လေးတွေနေဆဲလောင်းကစားဝိုင်း join နှင့်ခရုဇ်သင်္ဘောများသို့မဟုတ်ခရီးသည်အပေါ်စက်သေနတ်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ ကလေးများနှင့် 10 ယူရိုဖြစ်သောအများဆုံးလောင်းကြေး, ကန့်သတ်။
အခြို့သောလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်လောင်းကစားထူထောင်မှုများနေရာချထားရှိပါတယ်။ သူတို့ကသီးခြားအဆောက်အဦတွင်တည်ရှိသည်နှင့်ဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးသော, ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်စျေးဝယ်စင်တာများ၏အစိတ်အပိုင်းနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကလိုအပ်ချက်သီးခြား output ကိုဖြစ်ပါတယ်။
2012 အစပိုင်း၌, လောင်းကစားထူထောင်မှုအပိုင်းပိုင်း 40 ဖို့လောင်းကစားခန်းမထဲမှာစက်တွေ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးမှာပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဆီးတားနိုင်ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနီးစပ်သူဖြစ်လာခဲ့သည်ရသောသေးငယ်တဲ့လောင်းကစားရုံမှတစ်ဦးပြင်းထန်ထိုးနှက် - တဖကျတှငျကအခြားအပေါ်ဖျော်ဖြေရေး၏အကွာအဝေးကိုချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏အရေအတွက်နီးပါးထက်ဝက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီဧည့်သည်အပေါ် impact ခဲ့ပါဘူး။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုခုနှစ်တွင် pluses လည်းရှိပါတယ်။ လောင်းကစားဝိုင်းခံစားနေရပြီးအရေအတွက်လျော့ကျအတွက်ဆွဲထုတ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံအခွန်နှင့်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ပိုင်ရှင်များထံသို့စေလွှတ်သောလူစာရင်း။ အများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့အဘယ်သူမျှမကသို့သငျသညျအတင်းအဓမ္မကြောင့်မပါဝင်ပါလိမ့်မယ် - သူကတင်းကြပ်စွာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖွင့်နှင့် player များ၏ဆန္ဒပေါ်တွင်မူတည်သည်။ , ဘဏ်များ၏စာရင်းတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်အလွန်အကျွံလောင်းကစားသမားတွေ၏အကောင့်အပေါ်ဘဏ္ဍာရေးခြေရာခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အလားအလာငွေချေးဖို့သူတို့ကိုခွင့်မပြု။
အက်စ်တိုးနီးယား၌သငျလောင်းကစားရုံများဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည် ။ နှင့်ဤမြို့တော်မှသာသက်ဆိုင်ပါသည်။ အများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာလောင်းကစားရုံတဲလင်းမြို့က Narva, တာတူး, Pärnuနှင့်Jõhviအပြင်, တည်ရှိသည်။
အက်စ်တိုးနီးယား - ဤတိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေနှင့်လှပသောသဘာဝတရား၏ပရိသတ်များအဖို့ဿုံသင့်လျော်သောအလွန်ကြီးစွာသောအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ Spa မ်ားPärnuနှင့် Saaremaa ကျော်ကြားရှေးတဲလင်းမြို့က - ဤနေရာတွေ, အဖြစ်ကောင်းစွာအခွားသူမြားစှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှယင်း၏အချိန်, ဗိသုကာအထိမ်းအမှတနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကျော်တိုင်းတာဖို့ခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်အဖြစ်။ ကလောင်းကစားရုံကိုသွားသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကစားရန်အက်စ်တိုးနီးယားဖြစ်နိုင်ပါသလော ကြည့်ကြရအောင်!
လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ် Estonian အဘိဓါန်ဥပဒေများကို - 1990 မှ 2017 ကနေသမိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်;
ခွင့်ပြုခဲ့နှင့် (ထိုသူတို့အားလင့်များဤဆောင်းပါးကို၌ရှိကြ၏) ဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့တဲ့စာရင်းထဲမှာရှိ၏
ထိုပြည်ကို-based လောင်းကစားရုံမှဝင်ပေါက် 21 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
ဤတိုင်းပြည်များတွင်လောင်းကစားအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များနှင့်အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံ« Reval ပန်းခြံ»ဘို့ငါတို့ဆောင်းပါးဖတ်ပါ။
လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ် Estonian အဘိဓါန်ဥပဒေများကို - သမိုင်းနောက်ခံ
အက်စ်တိုးနီးယား 1991 အတွက်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပေမယ့်တိုင်းပြည်အတွင်း XX ရာစုနှောင်းပိုင်း 80-ies အဆိုပါဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်ကတည်းက။ ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပျေါလှငျ, နှင့်ဥပဒေရေးရာဥပဒေများကိုကျနော်တို့စားပွဲပုံစံအတွက်တင်ပြ။
1989 သင်္ဘော "Georg Ots" သူတို့ကငွေအဘို့ကစားရှိရာပထမဦးဆုံးဂိမ်းကစားခန်းမ, ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တဲလင်းမြို့၏ဟိုတယ် "နန်းတော်" အတွင်းပထမဆုံးလောင်းကစားရုံ။
1990-1994 အိုလံပစ်ကာစီနို, Kristiine ကာစီနိုကဲ့သို့သော network များကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်, Play-ခုနှစ်တွင်ကာစီနို Group မှ။ ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များလိုင်စင်။
1995 "လောင်းကစားဝိုင်းတွင်" ဥပဒေ N ကို 580 ။ ဒါဟာမြောက်မြားစွာအပြောင်းအလဲများနှင့်ပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူဒါဆောင်ရွက်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှလိုင်စင်စေသောအရာ, ထိုပြည်နယ်အတွင်းရှိစုစည်းဖို့, လက်ျာ။ (- 10 နှစ်ပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးအဖြစ်) နှင့်အခွင့်အလမ်း၏ဂိမ်းများကိုစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုချက်လောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်သေချာပါစေ (အချို့တိကျသောတည်နေရာအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် -5နှစ်ပေါင်း) ။
1997 လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းပေမယ့်ကြော်ငြာ၏ Advertising ကြော်ငြာ။ လောင်းကစားဂိမ်းများကိုတိုးနီးယား၏အော်ပရေတာများ၏အသင်းအဖွင့်။
2008 "လောင်းကစားတွင်" ပညတ်တရား၏တင်းကျပ် - အမြဲတစ်ဦးရဲ့အထောက်အထားကဒ်အားလုံးဧည့်သည်များ fixed နေကြတယ်, ကစားသမား, အလောင်းကစားရုံပိတ်ပင်ရန်သူ့ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာရပ်ခံချက် (Gambler ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှ) စေလိမ့်မည်။ လောင်းကစားအက်စ်တိုးနီးယားအပေါ် self-န့်အသတ်သည့်အခွန်, အကောက်ခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သတ်မှတ်နိုင်သည်။
2009 အွန်လိုင်းကာစီနို၏ဥပဒေ - ဥပဒေရေးရာအော်ပရေတာများ၏လိုင်စင်နှင့်တရားမဝင်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံသာလူကြီးများမှမရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်ကစားသမား၏နေအိမ်သို့၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်နေရာကိုဖေါ်ထုတ်ရန်။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတရားဝင်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာအလှည့်အတွက်စတိုးနီးယား၏ပိုင်နက်အတွင်းဥပဒေရေးရာထုံးစံ၌လည်ပတ်ရသောဒေသခံအော်ပရေတာနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ထဲသို့ဝင်စေနိုင်သည်။ အားလုံးသည်အခြားတရားမဝင်နိုင်ငံခြားဆိုဒ်များ network operator များမှပိတ်ဆို့နေကြသည်, ထိုအခိုက်မှာတိုးနီးရနျးနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာအတွက်ပိတ်ပင်ထားများ၏စာရင်း 1000 ဘို့လွန်ပြီ။
အွန်လိုင်းကာစီနို - တကယ်တော့တွင်ဤဥပဒေများကစားသမားများအတွက်ဆိုလိုသလော
သည်, လောင်းကစားတားမြစ်သည်, ဒါပေမယ့် 100% အောက်မှာနိုင်ငံတော်ကထိန်းချုပ်ထားသည်မဟုတ် - စတိုးနီးယားမှာ, လောင်းကစားစပ်လျဉ်းဒါခေါ်ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်မှုစနစ်အားအသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်ရှိသောပြည်-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအဖြစ်အော့ဖ်လိုင်းသက်ဆိုင်ပါသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံလုံးဝဖြေရှင်းသူတို့ကို play ပြီးတော့, ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာလိုင်စင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အက်စ်တိုးနီးယား, ပုဒ်နှင့်လုပ်ကွက်များတွင်လိုင်စင်မရှိဘဲနိုင်ငံခြားရေးလောင်းကစားရုံ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံတွင် "အနက်ရောင်စာရင်း" တွင်ထည့်သွင်းမထားလျှင်, ထို့နောက်သူကမည်သည့်အချိန်တွင်မသွားနိုင်ပြီးထို့နောက်အထွက်အမြတ်ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကစားသမားဥပဒေရေးရာအသက်ဖြစ်ရမည်။ ယင်း၏ data တွေကိုကစားသမားတစ်ဦးကိုအထူး database ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
Track အကောင့်များနှင့်အနိုင်ရရှိတဲ့ - ပိုက်ဆံသာသိုက် (ဒီ, အရှင် "ပိုက်ဆံ laundered" ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြု) ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအထဲကအကောင့်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
လိုင်စင်ရကာစီနိုလောင်းကစားရုံအရွယ်ရောက်ပြီးသူ (မသင်မနေရဝိသေသလက္ခဏာကဒ်) သွားရောက်ခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအခွန်, အကောက်ခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးထုတ်ပြန်ချက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာငြင်းပယ်ခံရ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်ဂိမ်းပေါ် မူတည်. အဘို့, ထို့နောက်လောင်းကစားရုံကစားသမားပါစေပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
These အဆိုပြုချက် dopolnitenyh အခြေအနေများလိုအပ်နိုင်ပါသည်
Kolyvan, Rewal ဗြာဒိတျ - ဒါကြောင့်မတိုင်မီတဲလင်းမြို့ကကိုခေါ်။ , အနည်းဆုံးအား 900 နှစ်ပေါင်းအဆိုပါမြို့။ မြို့တော်၏နာမတော်ကိုဆိုလိုနိုင်ပါတယ် "ဒိန်းမတ်ရဲတိုက်", "ဆောင်းကာလကိုမွို့" သို့မဟုတ်ရိုးရိုး "သော့ခတ်" ။
တဲလင်းမြို့ - နာမည်ကြီးဥရောပဆိပ်ကမ်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးယဉ်ကျေးမှုအထင်ကရ - မှအဓိကအားကြောင့် အဟောင်းကိုမြို့ ။ XV ရာစုနှစျမြား, တာဝါတိုင်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကအပါအဝင် - တမြို့လုံး၏ဤအပိုငျးမှာတော့များစွာသောအဆောက်အဦးများ XI စောင့်မတော်မူ၏။
နိုင်ငံ၏သမိုင်းကိုအနီးကပ်ရုရှားနိုင်ငံ၏သမိုင်းနှင့်အတူရောယှက်နေသည်။ မဟုတ်တစ်ချိန်ကတိုးနီးယားဆိုဗီယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အမြဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏။ 1991 ခုနှစ်, တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
တဲလင်းမြို့ - မြို့တော်၏စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်တမြို့လုံးကိုသာ 430,000 မြို့သားတို့ကိုအလွန်သေးငယ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ 40 "လောင်းကစားရုံ" အကြောင်းပါ။ အက်စ်တိုးနီးယားလောင်းကစားရုံမဆိုလောင်းကစားတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည် - slot ကစက်တွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ကလပ်အနည်းငယ်ဂိမ်းကစားစားပွဲနှင့်အတူဟိုတယ်အတွက်အလွန်သေးငယ်သောအခန်းတစ်ခန်းနှင့်, သင်တန်း, High-grade ကိုကြီးမားသောလောင်းကစားအိမ်များ။
အက်စ်တိုးနီးယား၏မြို့တော်များတွင်အစဉ်အမြဲလှည့်ခရီးသည်များအများကြီးဖြစ်ပါသည် - ဒီဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံကနေလာမယ့်နေကြသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကလောင်းကစားရုံန်ထမ်းများဧည့်သည်များလေ့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးထိုသူတို့အစေခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြို့အအကြီးမားဆုံးလောင်းကစားရုံ - အဆိုပါ Reval ပန်းခြံပြီးတော့ ။ ဒါကဂန္ (ထိုစကားလုံးများ၏အကောင်းဆုံးသဘောအရ) ကောင်းတစ်ဦးဟိုတယ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားခန်းမနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
In အဆိုပါ Reval ပန်းခြံပြီးတော့ တရာ slot နှစ်ခုအကြောင်းကို, ကစားတဲ့, Baccarat, Blackjack နှင့်ဖဲချပ်ကအခန်းရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်များနှင့်မြို့နေထိုင်သူများလှုပ်ရှားမှုများဒီလိုမျိုးလေ့ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာစကားမစပ်, အက်စ်တိုးနီးယားအများအပြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံတမြို့လုံးကပိုင်ဆိုင်သည် အိုလံပစ်၏ Entertainment ရဲ့ Group မှဖြစ်ပါသည် , အခြားဘောလ်တစ်တိုင်းပြည်များနှင့်ပိုလန်, လိုဗက်ကီးယားနှင့်ဘယ်လာရုစ်အတွက်တည်ထောင်သည့်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံမှဝင်ပေါက် 21 နှစ်အတွင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များမှခွင့်ပြုထားသည်, ထိုစားဆင်ယင်ကုဒ်မဟုတ်ပါဘူး - "sportivkah" တွင် မှလွဲ. ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
1 ။ မြို့ဟောင်း: သင်ပထမဦးဆုံးသွားသင့်ရာအရပ်။ တမြို့လုံး၏ဤအပိုငျး၏သမိုင်း၏အမြစ်များကို 13th ရာစုမှတတ်၏။ ထာဝရပိတ်သောကျောက်ကျော်, မူရင်းအလှအပအတွက်ထိန်းသိမ်းထားပျူငှါနွေးထွေးသောကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများ, စစ်မှန်အဆောက်အဦးများ: အခြားကမ်ဘာပျေါတှငျကိုယျ့ကိုယျကိုသငျသညျကိုရှာဖွေပါ။
At အဆိုပါ Town Hall ရင်ပြင် ကဖေး, စားသောက်ဆိုင်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စျေးဆိုင်အမျိုးမျိုး, ဖက်ရှင်ဆိုင်များအများကြီးရှိပါတယ်။ ဟောငျးမြို့ထိပ်မှလမ်းလျှောက်ဖို့ Excellent ကစိတ်ကူး, Vyshgorod , မြို့နှင့်ပင်လယ်ခြွင်းချက်အမြင်ကမ်းလှမ်းရာ။
2 ။ Kick-In-de-Kok: ကဝိုင်းထားတဲ့အဟောင်းမြို့၏အကျော်ကြားဆုံးတာဝါတိုင်များ၏တဦးတည်း - ထူမြို့ရိုးကို - ထို tautology excuse ။ ၎င်း၏အမည်ကို "အဖြစ်ဘာသာ "မီးဖိုချောင်ထဲမှာကွညျ့ရှု - တကယ့်အနီးအနားရှိအိမ်ခြေရှိလူများကိုပွငျဆငျကြောင်းသိသာခဲ့လို့ပဲ။
အမြင့်က de Kok အတွက် Kiek နီးပါး 40 မီတာ, မြို့ရိုး၏အထူ -4မီတာ။
3 ။ Kadriorg: ရုရှားအင်ပါယာ၏လူသိအမွေအနှစ် - ပတေရုသဗြဲ၏နန်းတော်အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အဦးတွင်တည်ရှိသည်ယခုပြတိုက် 1718 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။
Kadriorgtakzhe ကိုခေါ် Ekaterinentalem - "။ ကက်သရင်း၏ချိုင့်" ဒီနန်းတော်စမ်းရေ, ငှက်များနှင့်ပန်းပွင့်နှင့်အတူလှပသောပန်းခြံကဝိုင်းထားသည်။
မနီးမဝေးနန်းတော်ကနေမော်ဒန်အနုပညာ Kumu ၏ပြတိုက်, မြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ဥရောပအကြီးဆုံးပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စတိုးနီးယားနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်
ပြည်သူ့အင်အား : 1,293 သန်း
ဘုံဘာသာစကားများ : တိုးနီးရနျး, ရုရှ, အဂၤလိပ္
ငွေကြေး : အီးယူအာရ်။
ရုရှားနိုင်ငံလိုအပ်ကြောင်းစတိုးနီးယားနိုင်ငံသားများသို့ entry ကိုများအတွက် ဗီဇာ .
0.1 ထိပ်တန်း 10 Estonian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
2.0.2 Estonian အဘိဓါန်လောင်းကစားဝိုင်းဥပဒေများ
3.0.1 လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ် Estonian အဘိဓါန်ဥပဒေများကို - သမိုင်းနောက်ခံ
3.1 အွန်လိုင်းကာစီနို - တကယ်တော့တွင်ဤဥပဒေများကစားသမားများအတွက်ဆိုလိုသလော
3.1.0.0.2 အော့ဖ်လိုင်းမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
3.1.1 တဲလင်းမြို့ကစတိုးနီးယား: တာဝါတိုင်နှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏မြို့
3.1.5 စတိုးနီးယားနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်
bovegas အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ codes တွေကို 2020